I-Amazon Integration - I-Propars E-export nge-Amazon, Ebay, Allegro kanye ne-Etsy
Kulula ukuphatha isitolo sakho se-Amazon.com ngePropars!
Layisha imikhiqizo yakho kwaPropars bese uyithengisa ku-Amazon, ipulatifomu ye-e-commerce enkulu kunazo zonke emhlabeni!
Nge-Propars, ukuhlanganiswa kwe-Amazon, qala ukuthengisa kuwo wonke amazwe lapho i-Amazon isebenza khona, ikakhulukazi eMelika, eYurophu naseNhlonhlweni yase-Arabia!
Ama-oda wakho avela ku-Amazon aqoqwa kusikrini esifanayo nayo yonke eminye imiyalo yakho.
Ungathengisa imikhiqizo oyengeza ku-Propars e-Amazon ngokuchofoza okukodwa.
Kungani abantu bethenga kimi ngemuva kokuvula isitolo e-Amazon?
"Kukhethwa ukuthengiswa e-Amazon
Ukwethembeka komkhiqizo we-Amazon, hhayi isitolo sakho."
I-Propar Blog: Kungani kufanele ngithengise izinto eziyi-15 ku-Amazon?
Ngakho ake siqale
Ukujoyina i-Amazon emhlabeni wonke engxenyeni yokuqala ka-2020
inani labathengisi 651.000. Nanamuhla 3.145, ngehora 131, 2 abathengisi ngomzuzu
kusho. I-Amazon ngesilinganiso samanje esimaphakathi
Abathengisi abayizigidi eziyi-1.1 babamba iqhaza minyaka yonke.
Ukuthengisa ku-Amazon.com kubonakala kuyiphupho emabhizinisini amaningi. Nokho, ukuvula isitolo nokuthengisa kule makethe enkulu kulula kakhulu kunalokho ucabanga. Ukuze ukwazi ukuthengisa ku-Amazon ngokuhlanganiswa kwe-Propars-Amazon, kwanele ukuba nokubhaliswa kwentela okuvumelekile eTurkey. Uma unerekhodi lentela, okudingayo kuphela ama-Propar ukuze ube umdayisi endaweni yemakethe enkulu kunazo zonke emhlabeni!
Njengoba iyinkampani yokuqala nokuwukuphela kwayo eTurkey ukuhlanganisa ne-Amazon.com, i-Propars isohlwini lwe-Amazon SPN futhi inguzakwethu wesixazululo we-Amazon eTurkey.
Ungaphatha zonke izitolo zakho usendaweni efanayo ngokuhlanganisa ezinye izitolo zakho ezibonakalayo kuphaneli ye-Propars, lapho uzothengisa khona ku-Amazon.com.
Amazon.com Indawo Yemakethe Enkulu Kakhulu Emhlabeni
I-Amazon iyisizinda se-e-commerce esikhulu kunazo zonke emhlabeni esinabasebenzisi abasebenzayo abangaphezu kwezigidi ezingu-300 kanye nenzuzo yansuku zonke engaphezu kwesigidigidi samadola. Ukuba umthengisi kule ecosystem kusho ukuletha imikhiqizo yakho emhlabeni wonke. Imbobo elula nephephile yebhizinisi elifuna ukwenza i-e-Export.
Ngaphezu kwalokho, ukuqwashisa ngomkhiqizo we-Amazon nokwethembeka kukuvikela ezindlekweni ezibalulekile ezinokuphela okungaqinisekile.
Imikhiqizo yakho, ezohwetshwa nge-USD ku-Amazon.com, izothola inani ku-TL futhi yandise inzuzo yakho. I-E-Export ikunikeza izigidi zamakhasimende angaba khona futhi uthole imali engaphezu kwamazinga okushintshaniswa kwamanye amazwe.
Ukusethwa kwesitolo sokuhlanganisa i-Amazon
Ukumisa isitolo ku-Amazon.com kuyinqubo ebucayi futhi ebuhlungu. Ngalesi sizathu, qiniseka ukuthi ulungisa amadokhumenti akho ngendlela efanele futhi ngokuphelele. Amadokhumenti ebhizinisi lakho eTurkey asebenza ku-Amazon.
Ungakhohlwa ukuthi ungathola ukwesekwa kochwepheshe okuhlobene nale nqubo eqenjini le-Propar. Uma izinyathelo ezifanele zithathwa, inqubo yokusetha isitolo yisiteji esingadluliswa ngokushesha futhi kalula. Ngaphezu kwalokho, uma usuvele unesitolo se-Amazon, kuthatha imizuzwana embalwa nje ukusihlanganisa kuphaneli yakho ye-Propar.
Ungakwazi ukufinyelela uchwepheshe we-Propars khona manje ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe mayelana nokusethwa kwesitolo nokuhlanganiswa.
I-Propar - I-Amazon Integration
Nge-Propar, uzakwethu webhizinisi le-Amazon eTurkey, kuyenzeka ukuthi ibhizinisi ngalinye lidayiswe e-Amazon. Ezinye zezici ongazuza kuzo ekuhlanganisweni kwe-Propars-Amazon yilezi ezilandelayo;
- Ukufakwa kuhlu kwemikhiqizo ku-Amazon.com,
- Ukuphathwa kwe-oda kanye ne-e-invoyisi yamahhala,
- Ukulandelela isitoko okuzenzakalelayo,
- Ithuba lokuphatha laseTurkey,
- Ulimi oluzenzakalelayo nokuhumusha kokulinganisa,
- Ukusekelwa kokusetha kwesitolo,